Banaanbax lagu taageerayo Puntland - BBC Somali
Banaanbax lagu taageerayo Puntland
20 Jannaayo 2011
Dibad-baxyo waawayn oo lagu taageerayo go’aankii dawladda Puntland ay xiriirka ugu jartay dawladda federalka Soomaaliya ayaa shalay iyo maanta ka dhacay magaalooyinka waawayn ee Puntland.
Odayaasha dhaqanka iyo xubno kala duwan oo ka tirsan bulshada rayidka oo ka hadlay isu soo-baxyadaas ayaa tilmaamay in dawladda iyo shacabka Puntland ay mid yihiin, iyagoo dhinaca kalana ka codsaday madaxwayne Sh.Shariif inuu is-casilo.
Bannaan-baxyadan kii ugu dambeeyay wuxuu maanta ka dhacay magaalada Garowe kaas oo dadwaynihii ka qaybgalay ay dareen kulul ka muujiyeen mowqifka ay ka taagan yihiin madaxda sare ee dawladda federalka, iyo dhinaca kale taageerada ay u hayaan go’aankii ay dhowaan dawladda Puntland ka soo saartay xiriirkii ay la lahayd dawladda federalka.
Qaar ka mid ah nabadoonada iyo cuqaasha Puntland ayaa tilmaamay aragtidooda ku aaddan siyaasadaha is-maandhaafay ee Puntland iyo Federalka. Caaqil Khaliif Aw-Cali iyo cuqaal kale oo magac ku leh bulshada ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay fagaare wayn oo ku yaalla magalada Garowe.
Dibad-baxayaasha oo watay waawayn oo ay ku qoran yihiin sida ay uga soo horjeedaan siyaasadda M/wayne Sh.Shariif iyo R/wasaaraha Somaliya ayaa ku baaqay inuu is-casilo M/waynaha iyagoo tilmaamay inuu sii kala fogeeyey dadka Soomaalida ah waa sida ay u dhigeene.
Haween fara badan oo ka qaybgalay banaan-baxan ayaa iyaguna dareenkooda ka muujiyay, Luul Feerayare iyo haween kale oo ka qaybgalay banaan-baxa maanta ka dhacay Garowe ayaa tilmaamay dareenkooda ku aaddan in shacabka iyo dawladda Puntland ay yihiin kuwo mid ah.
Dadkii faraha badnaa ee ka qaybgalay dibad-baxa maanta ka dhacay Garowe waxay socod ku soo mareen waddada laamiga ah ee gudaha magaalada ku taalla, iyagoo markii dambe isugu soo ururay fagaaraha wayn ee ku yalla bartamaha magaalada.
Maalintii shalay ayaa dibad-baxyo kale oo noocan ahi waxay ka dhaceen magaalooyinka Galkacyo iyo Bosaaso kuwaas oo ay ka qaybgaleen madaxda dhaqanka iyo qaybaha kale ee dadwaynaha, waxana dhamaan kulamadaas lagu soo bandhigay in dawladda iyo dadwaynuhu ay ka midaysan yihiin go’aannada laga gaaray maamulka Sh.Shariif.
Marka la eego dareenka dadwaynaha Puntland guud ahaan iyo dadka ka qaybgalay dibad baxayadan waxay intooda badan diiradda ku saarayaan mowqifkii Madaxwayne Sh.Shariif uu ku diiday inuu wafdiga Puntland kala qaybgalo kulankii ka dhacay Djbouti.
Arrintu waxay sii cakirantay markii Ra'iisalwasaare Farmaajo uu isaguna sheegay in shacabka Puntland uusan dawladdiisa ku raacsanayn go’aankii xiriirka loogu jaray dawladda federalka, taasoo dhab ahaan ay ka dhalatay caro xoog leh oo ka timi maamulka iyo dadwaynahaba.